Vatsim-pianarana vahiny 2019-2020: ny volana janoary 2019 ny fametrahana fangatahana | NewsMada
Vatsim-pianarana vahiny 2019-2020: ny volana janoary 2019 ny fametrahana fangatahana
Par Taratra sur 27/10/2018
Ny firenena vahiny sisa manome vatsim-pianarana ho an’ny mpianatra malagasy nahazo mari-pahaizana bakalorea sy ireo manana “licence” ka vonona hanohy fianarana hahazoana “masters” na “doctorat”. “Nanomboka ny taom-pianarana 2011-2012 no nitsahatra ny fanomezan’ny fanjakana malagasy vatsim-pianarana vahiny”, hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra ao amin’ny vaomieram-pirenena misahana ny vatsim-pianarana any ivelany na ny Conabex, Raharimanana Ravoninirina Marie, omaly teny Ankadifotsy.
Ho an’ny taom-pianarana 2018-2019, firenena fito ny nanolotra vatsim-pianarana ho an’ny tanora malagasy : i Maroka, i Rosia, i Indonezia, i Tonizia, i Alzeria, i Egypta ary i Maorisy. Mandalo eny amin’ny Conabex Ankadifotsy ny tolotra vatsim-pianarana ka eny ihany koa ny fandraisana ny antontan-taratasy fangatahana ho an’ny mpianatra maniry ny hahazo izany. Efa nanomboka avokoa ny taom-pianarana 2018-2019 ho an’ny ankamaroan’ny sekoly ambony any ivelany ka mpianatra malagasy manana mari-pahaizana bakalorea manodidina ny 139 teo ho eo no nahazo vatsim-pianarana amin’ny firenena fito voalaza ireo. “Ireo mpianatra valo hianatra any Egypta, hanainga anio eto Madagasikara fa ny rehetra, efa lasa avokoa”, hoy ny nambarany ihany.
“Mention très bien” sy “bien”
Amin’ny ankapobeny, ireo nahazo ny « mention très bien » sy « bien » amin’ny bakalorea no mahazo ny vatsim-pianarana satria mbola halefa any amin’ireo firenena mpanome vatsim-pianarana ny antontan-taratasin’ny mpianatra mpangataka malagasy.
Ho an’ny taom-pianarana 2019-2020, manomboka ny volana janoary 2019 ny fandrasaina ny antontan-taratasy fangatahana vatsim-pianarana any ivelany ho an’ny mpianatra nahazo ny bakalorea taona 2018. Ilaina ny manomana ny diplaoma sy ny naoty tamin’ny bakalorea. Manampy ireo ny naoty nandritra ny kilasy 2nde hatramin’ny famaranana. Misy taratasy manokana fenoina koa alaina eny Ankadifotsy ihany rehefa hametraka ny antontan-taratasy fangatahana. Ho an’i Alzeria, nisy vatsim-pianarana dimy ho an’ny mpianatra amin’ny taom-pianarana 218-2019 fa tsy nivaly mihitsy ilay fangatahana.